Waa sidee xaaladda qoxooti Soomaaliyeed oo ku xaniban dalka Yeman oo dagaalo ay ka soconayaan - Somalia Focus
Waa sidee xaaladda qoxooti Soomaaliyeed oo ku xaniban dalka Yeman oo dagaalo ay ka soconayaan
14,Macrh,2017(SofoNews) Boqolaal qoys oo Soomaali ah oo kunool xerada Qoxootiga Dalka Yeman ee Alkharas ayaa soo wajahday xaalado nolol xumo oo aad u daran waxayna sheegayaan in ay u baahanyihiin gar gaar deg deg ah.
Qaxootigan oo u badan dumar iyo carruur badankooda ku dhashay xeradaasi ayaa waxay sheegeen iney haystaan dhibaatooyin la xiriira dhinacyada Caafimaadka, Raashinka, Hooyga iyo Waxbarashada, kuwaasoo dibadbax ka hor sameeyey xarunta hay’adda UNHCR ay ku leedahay magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen.
Waxay sheegeen Qaxootiga Soomaaliyeed in ay xaaladooda sii adkaatay kaddib markii ay dagaallada ka soo cusboonaadeen dalkaasi Yemen, kuwaasoo aanan wax gargaar ah helin.
Dowladda Federaalka iyo Hay’adaha Samafalka ayay ka codsadeen in xaaladooda wax laga qabto,Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Yemen ayaa halkaasi ku noolaa 27-kii sano ee ugu dambeeyey.
Kumanaan qoys oo qoxooti ku ahaa dalka Yeman ayaa dib ugu soo laabtay Soomaaliya kuwaasi oo soo gaaray inta badan Jabuuti, Soomaaliland,iyo Puntland iyo deegaano kale oo katirsan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo ku dhawaaqaya golihiisa wasiirada